Madaxweynaha Puntland oo Garoowe ka degay ka dib socdaalkisii Kenya – SBC
Madaxweynaha Puntland oo Garoowe ka degay ka dib socdaalkisii Kenya
Garoowe- Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa dib ugu soo laabtey magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ka dib safar asbuuc qaatey uu ku tagey magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi oo uu uga qayb galey shirkii ay qabanqaabisay Qaramada Midoobey ee ku aadanaa armaha Soomaaliya.
Faroole ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyey masuuliyiin uu horkacayey madaxweyne kuxigeenka Jen. Cabdisamad Cali Shire ayna ka mid ahaayeen golayaasha xukuumada & Baarlamanka & waliba dadweyne fara badan.
Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa Wasiirka Arimaha Gudaha,Dawladaha hoose & hormarinta reer miyiga Jen.Cabdullaahi Axmed Jaamac (Ilkajir),Wasiirka Waxbarashada Cabdi Faarax Siciid (Juxaa) Iyo Wasiiru-dawlaha Madaxtooyada ee Tastuurka & Arimaha Federaalka Dr.Cabdi Xassan Jimcaale.
Madaxweynaha oo si kooban uga hadley dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo wuxuu si kulul u cambaareeyey falalkaasi isagoo ku tilmaamay waa sida hadalka uu u yiriye inay ka dambeeyaan falalkaasi dad cadow ku ah jiritaanka iyo nabada Puntland.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in C/raxmaan uu kulamo la qaato laamaha amaanka, golaha wasiirada & waliba duqeyda dhaqanka si uu ugala hadlo xaaladaha amaanka ee Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo maalmahan amaankeedu faraha ka sii baxayo.
Apriil 19, 2011 at 7:23 pm
madaxwayne ku soo dhawaaw wadankaagi intaad naga maqnaydna nabad iyo barwaqo ayaan kju jirnay